Zeblaze Cosmo, smartwatch dị ike, mara mma nke nwere ọnụ ahịa dị mma | Akụkọ akụrụngwa
Ahịa ahụ ejupụtala n'oge ndị a na smartwatches nke ụdị dị iche iche yana ọnụahịa dị iche iche dị iche. Site na Apple Watch na Huawei Watch na Samsung Gear S2, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnwe ọtụtụ nhọrọ na ọrụ na nkwojiaka ekele otu n'ime ngwaọrụ ndị a. Na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị a kacha mara amara sitere na nnukwu ụdị, enwekwara elekere ndị ọzọ dị na ahịa, yana ọnụahịa ka mma na nke ahụ na-enye anyị usoro ihe ịga nke ọma na usoro nke ihe karịrị njirimara na nkọwa na-adọrọ mmasị.
N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, anyị nwere ohere ịnwale Zeblaze Cosmo, site n'aka ndị enyi anyị site na Geekbuying ma jiri ezi obi kwuo na ọ juru anyị anya. Malite na ọnụahịa ya, nke na-anọ n'okpuru 65 euro ma na-aga n'ihu na ya emezu imewe na uru ọ na-enye anyị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartwatch na ọnụ ala belata, na-enweghị ida arụmọrụ, gụọ akwụkwọ maka na n'isiokwu a anyị ga-egosi gị nyocha miri emi banyere Zeblaze Cosmo a, nke bụ ihe ijuanya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ya niile.
2 Zeblaze Cosmo Atụmatụ
3 Isi ihe Zeblaze Cosmo
4 Akụkụ na-adịghị mma nke smartwatch a
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke smartwatch bụ imewe ya na nke ahụ bụ na anyị ga-eyi ya na mpaghara nke ahụ anyị nke ukwuu na nke onye ọ bụla na-ahụ. Zeblaze Cosmo a nwere ụdị ịkpụ oge ochie, dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo so isiokwu a.
Ewezuga atụmatụ ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Zeblaze mepụtara smartwatch vintage na eriri mara mma na akụkụ akụkụ anọ, ejiri ọla edo mechaa nke na-enye ya mmetụ dị iche na nke dị iche. Anyị nwekwara ike ịchọta smartwatch a na ọlaọcha, nke nwere ike bụrụ ihe na-amasị ọtụtụ ndị ọrụ. O doro anya ma ọ bụrụ na ị bụ T-shirt na uwe mwụda nke oge a, ikekwe ụdị elekere a abụghị nke kachasị adabara gị.
Ikekwe naanị isi ihe na-adịghị mma nke atụmatụ ya bụ ụzọ anyị ga-esi were ngwaọrụ ahụ yana nke ahụ bụ na ọ bụ site na ụdị nkwụnye etinye na azụ, nke siri ike idobe ebe ọ bụ na ijegharị ọ bụla a tọhapụrụ, na-akụda olile anya anyị ịwụnye batrị smartwatch ọsọ ọsọ
Zeblaze Cosmo Atụmatụ
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Zeblaze Cosmo a;
Akụkụ: 25 x 3.6 x 1.1 cm
Ibu ibu: 53 grams
Ihuenyo: 1.61 inch IPS nwere mkpebi pixel 256 x 320
Ihe nhazi: MTK2502
Njikọ: Bluetooth 4.0
Ọrụ ndị isi: Kpọ oku, akwụkwọ adreesị, ịza oku, ncheta ozi, ụra ụra, nyocha ọrụ ahụ, ncheta ịnọ ọdụ, pedometer, ihe mmetụta ụda obi, egwu dịpụrụ adịpụ na njikwa igwefoto, kalenda, mkpu, ihe mgbako, ihe ndekọ ụda.
Ike batrị: 250 mAh
Ndụ batrị: Ihe dị ka ụbọchị 3 na-eji ọkara
Ndakọrịta: iOS na gam akporo
Asụsụ: Spanish, Portuguese, Bekee, French, Russian, German, Italian, Swedish, Polish, Arabic, Indonesian, Turkish, Thai
Akụrụngwa: Akpụkpọ anụ na metal
Dị na agba: Ọlaọcha na ọla edo
Igbe dị: 1 x Zeblaze Cosmo, 1 x USB USB, 1 x Akwụkwọ Bekee na China
Isi ihe Zeblaze Cosmo
Mgbe anyị nyochachara ya maka ụbọchị ole na ole, anyị ga-eme nchịkọta nke isi ihe nke smartwatch a, nke ahụ ga-enyere ọtụtụ n'ime gị aka ikpebi ma ọ bụ na ọ bụghị nzụta gị.
Otu n'ime ihe ndị kachasị m chọrọ ka m mata bụ Asambodo IP65 na ngwaọrụ a nwere nke ahụ na - eme ka ọ ghara iguzogide aja na mmiri. Ọ bụrụ na ị dị ka m, onye na-enweghị nlezianya na nche, nke a dị mkpa maka oge ndị ahụ mgbe ị na-abanye mmiri na-enweghị ịsa ahụ ma ọ bụ wụba n'ime ọdọ mmiri na ya.
La ijikọ na ngwaọrụ ọ bụla gam akporo ma ọ bụ iOS ọ dị mfe site na ngwa enwere ike ibudata maka n'efu. Tụkwasị na nke ahụ, nhọrọ ndị ọ na-enye anyị dị ukwuu ma n'etiti ha bụ ohere nke nyochaa mmega ahụ anyị kwa ụbọchị ma ọ bụ ọbụna ịchịkwa ọnụọgụ nke oge anyị rahụrụ na ịmara ụfọdụ data metụtara awa ndị ahụ anyị na-ehi ụra.
N'ikpeazụ, anyị ga-egosipụtakwa na ọ na-enye anyị ka anyị jikọọ wearable na ngwaọrụ mkpanaka anyị site na bluetooh 4.0 nke dị ala, nke pụtara na batrị nke ama anyị na smartwatch adịghị belata nke ọma, dị ka ọ na-eme na elekere smart smart ndị ọzọ. dị na ahịa.
Akụkụ na-adịghị mma nke smartwatch a
Na-eburu n'uche ọnụahịa nke smartwatch a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ anyị na-atụ uche nke ukwuu ọnụnọ nke gam akporo Wear sistemụ Ọ bụ ezie na ngwanrọ ọ na-etinye adịghị njọ ma ọlị, ọ naghị egbu mara ya nke ọma na akụkụ ụfọdụ dị mkpa na-efu.
Ohere nke itinye kaadi SIM bụ akụkụ ọzọ anyị na-atụ uche, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ohere a abanyebeghị n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla anyị hụrụ n’ahịa. Anyị nwere ike ịsị na anyị gaara enwe mmasị na ya, mana anyị ghọtara enweghị ya.
N'ikpeazụ, dị ka anyị kwurula na ụzọ isi kwụọ ụgwọ a Zeblaze Cosmo Ahụ erughị ya ala ma ọ bụ na site na plọg a na-etinye n'azụ, site na magnet, a ga-akwụ ụgwọ smartwatch. O di nwute na plọg anaghị ejide nke ọma, na-enye ọtụtụ nsogbu mgbe ị na-eburu ngwaọrụ ahụ.
A na-ere Zeblze Cosmo a n'ahịa n'ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa na ụfọdụ ụlọ ahịa anụ ahụ ndị ọzọ, n'agbanyeghị na ndụmọdụ anyị bụ ka ị nweta ya Geekbuying, ebe ị nwere ike inweta ya na nchekwa zuru oke yana kwa maka ọnụahịa dị n'okpuru euro 65 (64.48 euro), obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu kachasị mma na ahịa.
Na-anwale a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke smart ese, O juru m anya mgbe m na-anwale nke a Zeblaze Cosmo. Ọdịdị vintage ya emeela ka m nwee ịhụnanya n'ihi na ọ na-amasị m obere ma ọ bụ na-erughị atụmatụ ọdịnihu nke ka kpebisiri ike ịmalite ọtụtụ ụlọ ọrụ na ahịa.
Na mgbakwunye, nhọrọ nke ngwaọrụ Zeblaze a na-enye anyị dị mma ma zuru oke maka ọnụahịa anyị nwere ike inweta ya. Ọzọkwa, ekwesịrị m ịsị na naanị otu akụkụ na-adịghị mma m nwere ike ikwu maka ya bụ ụzọ m ga-esi buru ya, nke na-enye ụfọdụ nsogbu, opekata mpe ruo mgbe anyị '' kwụgidere ya '' iji kwado ya nke ọma.
Etu esi akwụ ụgwọ batrị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Zeblaze Cosmo, smartwatch dị ike, mara mma nke nwere ọnụ ahịa dị mma